Mpanamboatra traktera, mpamatsy - Mpanamboatra traktera China
12hp mandeha traktera / mandeha ao ambadiky ny traktera / odista mandeha mandeha amin'ny herinaratra
Ny endrika ivelany vaovao natao manontolo, dia misy motera, chassis, herinaratra, ampiasaina amin'ny fitarihana sy fitaterana.
Traktera mandeha 18HP / mandehana ao aorian'ny traktera oem
Fandefasana tratra mandeha kodiarana roa miaraka amin'ny Starter elektrika
Ny motera diesel mandeha amin'ny traktera dia manana rafitra tsotra sy matevina, lanja maivana, azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatra isan-karazany, toy ny tanimboly kely, tanimboaloboka, zaridaina voninkazo, trano fonenana mety indrindra ho an'ny saha tendrombohitra.
4 × 4 Fambolena Diesel Mini Tractor 4wd Miaraka amin'ny Cabin / Sunshade
Traktera mitondra kodiarana efatra dia karazana fibatana bothe sy fiarakodia miaraka amin'ny asany feno, mora ampiasaina ary karazana milina fiompiana. Ampiasaina be izy amin'ny famafazana, ny fambolena rotary, ny famafazana, ny fanondrahana, ny famafazana, ny fijinjana ary ny fitaterana sns. Amin'ny tanimbary, tany maina, tany maina ary zaridaina.
China Fiompiana trakta elektrika 30hp 35hp 40hp 45hp 50hp 55hp 60hp
Tractor dia manana ny fiasa amin'ny fahombiazana avo lenta, ny fanjifana solika ambany ary ny fandidiana mora sns sns. Azo ampiasaina betsaka amin'ny asa an-habakabaka isan-karazany toy ny zaridaina, toeram-piompiana, asa valan-tany ambanin'ny tany ary fananganana tanàna.
Factory Supply Mini toeram-pambolena Garden Tractor Price
1) maotera miovaova sy matanjaka miaraka amin'ny fanjifana solika ambany - ampio ny vokatrao sy ny fahaizanao mahomby.
2) Volavolan-drafitra ergonomika sy feno — Manome anao traikefa ahazoana aina rehefa mamboly, miasa tany, miasa tany sns.
3) Fitaovan'ny toeram-pambolena azo soloina — mpamboly volom-borona, tranofiara, mpijinja potota, milina fanarian-drano, fanapahana FM ary zavatra hafa
China manamboatra traktera mandeha 20hp / traktera kodiarana roa amidy
15hp mandeha mpitrandraka traktera / traktera mandeha mini / toeram-pambolena traktera kodiarana roa / mpamokatra traktera kodiarana roa / mandeha an-tongotra ao ambadiky ny traktera